Umaka: ubuqotho | Martech Zone
Amasu Abulala Ukukhangisa Kwakho Okuqukethwe #CONEX
Izolo ngihlanganyele ukuthi ngifunde okungakanani ngokwakha amasu e-ABM eCONEX, ingqungquthela eseToronto ne-Uberflip. Namuhla, bakhiphe konke ukuma ngokuletha zonke izinkanyezi zokukhangisa imboni ebinikeza zona - uJay Baer, ​​u-Ann Handley, uMarcus Sheridan, uTamsen Webster, noScott Stratten ukubala abambalwa. Kodwa-ke, i-vibe kwakungeyona into yakho ejwayelekile yokuqukethwe ukuthi-kanjani namathiphu. Kungumbono wami nje, kepha ingxoxo namuhla ibingaphezulu kakhulu kwalokho
Emasontweni ambalwa edlule bengiphumile edolobheni futhi angitholanga isikhathi esiningi sokubhala okuqukethwe ngendlela ebengijwayele ukwenza ngayo. Esikhundleni sokulahla okuthunyelwe okwenziwe uhhafu wembongolo, ngangazi ukuthi kwakuyisikhathi seholide kubafundi bami abaningi futhi futhi ngavele ngakhetha ukungabhali nsuku zonke. Ngemuva kweminyaka eyishumi yokubhala, leyo yinto engihlanyisa - ukubhala kumane nje kuyingxenye
Ukumaketha esikhathini samanje kuyinto ehlekisayo; ngenkathi imikhankaso yokumaketha ngokusekelwe kuwebhu kulula kakhulu ukuyilandela kunemikhankaso yendabuko, kunolwazi oluningi olutholakalayo abantu abangakhubazeka ekufuneni idatha eyengeziwe nemininingwane eyi-100% enembile. Kwabanye, isikhathi esilondoloziwe ngokwazi ukuthola ngokushesha inani labantu ababone isikhangiso sabo esiku-inthanethi phakathi nenyanga ethile sinqatshiwe ngaleso sikhathi